Sudan iyo Masar ayaa sheegay in Ethiopia aysan si iskeed ah u buuxin doonin biyo xireenka lagu… – Hagaag.com
Sudan iyo Masar ayaa sheegay in Ethiopia aysan si iskeed ah u buuxin doonin biyo xireenka lagu…
Hogaamiyaasha Sudan, Ethiopia iyo Masar ayaa isku raacay in Ethiopia aysan bilaabi doonin buuxinta biyo xireenka ay ka dhistay webiga Nile, iyadoo aan heshiis la gaarin muddo labo toddobaad gudahood ah, sidaasina waxaa Jimcihii shaaciyey dalalka Sudan iyo Masar.
Ma jiro wax war ah oo arrintan ku aaddan oo si deg deg ah uga soo baxay Addis Ababa, oo iyadu horey u sheegtay in ay bilaabi doonto buuxinta biyo xireenkan weyn ee ay ka dhistay meel 15 km u jirta xadka ay la wadaagto Sudan. Biya xireenkan ayaa laga dhisayaa webiga Nile ee buluugga ah oo ah isha biyaha ugu badan ee webiga Nile.
Ethiopia ayaa ku adkeysatay in ay ku buuxin doonto biya xireenkan biyaha xilli roobaadka bilaaban doona bisha soo socota, laakin Masar ayaa baaq u dirtay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay taasi oo ah tallaabadii ugu dambaysay ee diblomaasiyadeed.
15-ka xubnood ee xubnaha ka ah Golaha Ammaanka ayaa lagu wadaa in ay Isniinta yeeshaan kulan guud, taasi oo uu ku baaqay Mareykanku oo taageeraya dalabka ka yimid dalalka Masar iyo Sudan ee ahaa in Golaha Ammaanku uu soo farageliyo ismari waaga arrintan ka taagan.